तपाईंको श्रोताको भाषामा बोल्दै | Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 1, 2010 शुक्रवार, अक्टुबर 1, 2010 Douglas Karr
यो फ्रान्सेली कन्फरेन्स रूममा बसिरहेको संचारको बारेमा पोष्ट लेख्ने मात्र उपयुक्त छ। हिजो राती हामीले एउटा कम्पनीको साथ PPM को लागि खाने तालिका बनायौं ले प्रोकोप, पेरिसको सब भन्दा पुरानो रेस्टुरेन्ट (१ 1686 ईस्ट)। हामी उत्साहित थियौं - यस रेस्टुरेन्टमा ड्यान्टन, भोल्टेयर, जोन पॉल जोन, बेन्जामिन फ्रेंकलिन र थोमस जेफरसन जस्ता संरक्षकहरू थिए।
हामी यहाँ पेरिसमा क्याब लिन गाह्रो समय भइरहेका छौं (असामान्य होइन)। क्याबहरू आउँछन् र तिनीहरूको सुविधा मा जान्छन्। हामीले होटलमा आधा घण्टा प्रतिक्षा गर्यौं र दरवारले हामीलाई कुनाको वरपर ट्याक्सी स्ट्याण्डतिर जान भन्यो। फ्रान्सको कुनाको वरिपरि संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुना भन्दा बढी छ। हामी ट्याक्सी स्ट्याण्डको साथ छेउमा पुग्नको लागि आधा किलोमिटर हिंड्यौं। र हामी त्यहाँ उभ्यौं ... अर्को 45 XNUMX मिनेट। यस बिन्दुमा हामी खाजामा ढिला छौं र हामीले छोडेका छैनौं!
हाम्रो ट्याक्सी अन्ततः देखाइयो, पा pet्ग्रामा एक खूबै सुन्दर फ्रान्सेली महिला। उनले विनम्रतापूर्वक सोधे कि हामी कहाँ जाँदै थियौं ... "ले प्रोपप" हामीले जवाफ दियौं। फ्रान्सेलीमा उनले ठेगाना मागे। मैले पहिले मेरो फोनमा ठेगाना पठाएको थियो तर सिंक गरेन त्यसैले म निश्चित थिएँ - रेस्टुराँ लुभ्रेले डाउन गरेको बाहेक। अर्को minutes मिनेट को लागी हामी भावुक भएर शब्‍दहरूमा करायौं जुन मैले सुनेको थिएन किनभने मेरी आमाले उनीहरूलाई बोलाउनुभएको थियो (उनी क्युबेकिस हो) सानो बच्चाको रूपमा। ट्याक्सी चालक यस्तो स्पष्टताको साथ चिच्याइरहेको थियो, म वास्तवमा अनुवाद गर्न सक्षम भयो…। "पेरिसमा धेरै रेस्टुरेन्टहरू" ...। "उनी ती सबैलाई कण्ठ गर्यो"। बिल (ब्यापार पार्टनर) र म हाम्रो टाउकोको साथ बसेर वायरलेस सिग्नलमा लक गर्न र ठेगाना प्राप्त गर्नका निम्ति रौं।
तनावग्रस्त भएर मैले बिलको लागि ठेगाना मागेँ। ऊ सबै कुरा सम्झन्छ ... उसले यो याद गर्नुपर्दछ। बिलले मलाई राहतबाट बाहिरको तनावमा हेरे र उनले यो ठेगाना फ्रान्सेलीमा भएको हो भनेर दोहोर्याउन थाले। “तपाईं मलाई फ्रान्सेली भाषामा किन भनिरहनु भएको छ? केवल यो हिज्जे !!!! " उसले फ्रान्सेली उच्चारणको साथ यो हिज्जे ... म उसलाई मार्दैछु। यस बिन्दुमा, हामी एबट र कोस्टेलो जस्तो देख्छौं कि हाम्रा बुट्टाहरू क्रोधित फ्रान्सेली ट्याक्सी चालकले लात हान्छन् जुन हाम्रो भन्दा आधा आकारको छ।
हाम्रो ट्याक्सी चालक बाहिर निस्के! उनले छिटो ड्राइभ गर्यो… चिच्याईरहेको थियो र कुनै पनि कार वा पैदल यात्री जो उनको मार्गमा जान हिम्मत गर्दै थिई। जब हामी मध्य पेरिसमा हिर्कायौं, बिल र म केवल हाँस्न सक्थ्यौं। मैले उनको धेरै कुरा उठाइन ... "टाउकोमा बिरामी" ... "यो खाऊ!" जसरी हामी यातायात भित्र र बाहिर निस्केका थियौं।
अन्ततः हामीले यसलाई पेरिसको केन्द्रमा राख्यौं।
हाम्रो ट्याक्सी चालकलाई सडक थाहा थिएन (उनलाई क्रस-स्ट्रिट आवश्यक छ), त्यसैले उनले हामीलाई बाहिर पठाइन् र हामीलाई खोजी गर्न भने। यस बिन्दुमा, हामी शहर, सुरक्षित हुनका लागि अविश्वसनीय रूपमा आभारी थियौं, र हामीले भर्खर देखेका थियट्रिक्सलाई दिएर हाँसिरहेका थियौं। मैले उनलाई फ्रेन्चमा उनलाई माया गर्ने कुरा बताएँ र उनले मलाई चुम्बन दिए ... हामी आफ्नो बाटो लागेका थियौं।
वा त हामीले सोच्यौँ।
हामी अर्को घण्टा वा सोही शहरको वरिपरिको शहर र वरिपरि हिंड्यौं ... अब खानाको लागि २ घण्टा ढिला। यस बिन्दुमा, हामीले आशा गरेका थियौं कि हाम्रो कम्पनीले हामीलाई नखोजी खाना खान थाल्यो र हामीले तौलियामा हाल्ने र खाने कुरा आफैंमा लिने निर्णय ग .्यौं। त्यो हामीले पारित गरेको थियो जब थियो टेक्स मेक्स इंडियाना रेस्टुरेन्ट ... बिल र मैले दुबै तस्विर लिनुपर्‍यो।
हामीले एउटा कुनामा गोल लगायौं र त्यहाँ हाम्रो अघि त्यसको सबै महिमामा ले प्रोपोप थियो। हामी भित्र हतारिए र वेटर्रेसले हामीलाई भने कि हाम्रो कम्पनी अझै छ! हामीले साँझको घटनाक्रमलाई जवाफ दिँदा हामी हाँसेर धेरै साझा गर्थ्यौं। बेलुकाको खाना अद्भुत थियो, र हामीले केही नयाँ साथीहरू बनायौं।
त्यहाँ केहि पाठहरू सिकेका थिए, यद्यपि:
तपाईको दर्शकहरुसँग प्रभावकारी रुपमा कुराकानी गर्न तपाईले गर्नु पर्छ उनीहरूको भाषा बोल्नुहोस्.
तपाईको दर्शकहरुसँग प्रभावकारी रुपमा कुराकानी गर्न तपाईले गर्नु पर्छ उनीहरूको संस्कृति पनि बुझ्नुहोस्.
तपाईंको गन्तव्यमा पुग्नको लागि, तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ कहाँ ठ्याक्कै थाहा छ यो छ - सकेसम्म धेरै परिभाषा संग।
हार नदिनुहोस्! यसले तपाईंलाई त्यहाँ पुग्न एक भन्दा बढी तरीका लिन सक्दछ।
यो सल्लाह फ्रान्सेली र अंग्रेजी वा फ्रान्स र इन्डियाना पार गर्दछ। यो हामीले मार्केटिंगमा पनि हेर्नु आवश्यक छ। प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्नको लागि, हामीले हाम्रो बजार कहाँ छ, जहाँ हामी तिनीहरू चाहन्छौं भनेर ठ्याक्कै जान्नु आवश्यक छ, तिनीहरूलाई प्राकृतिक रूपले प्रभावकारी रूपमा सार्नका लागि विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र उनीहरूको भाषामा बोल्नुहोस् - हाम्रो होइन। र यदि तपाईं पहिलो तरिका जडान गर्नुहुन्न भने, तपाईंले आफ्नो सन्देश प्राप्त गर्न अन्य तरिकाहरू प्रयास गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
यदि तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ भने ... हामीले सबवेलाई फेरि होटलमा लग्यौं। 🙂
टैग: ग्राहक प्रोफाइलडिजिटल मार्केटिंग अध्ययनफिन्च ब्रान्डहरूIBM होशियार वाणिज्यमार्केटिंग अनुसन्धानमार्केटिंग सर्वेक्षणनेट प्लस
अक्टोबर 2, 2010 बिहान 9:58 बजे
"जहाँ तपाईं सम्मेलन कोठा हुनुहुन्छ, तपाईंले एउटा आविष्कार गर्नुपर्नेछ।" - भोल्टेयर फिन।